Ezinye izincwadi eziyi-6 zabalobi abavela kwaReal Sitio naseVilla de Aranjuez. Ukulethwa kwe-2 | Izincwadi Zamanje
Ezinye izincwadi eziyi-6 zabalobi abavela kwaReal Sitio naseVilla de Aranjuez. Ukulethwa kwe-2
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, Amabhuku
Ngenyanga edlule Yethula kubabhali abayi-6 wedolobha engihlala kulo, iRoyal Site neVilla de I-Aranjuez. Ngase ngihambile abanye 6 ukuqedela kweshumi nambili amagama emvelaphi kanye / noma amathonya yalesi sakhiwo esihle eningizimu yoMphakathi waseMadrid. Uyamenywa ukuthi uthathe uhambo lokuhambahamba noma uthole izindaba zabo ngenxa yalaba babhali. Asibone.
1 Aranjuez. Phakathi kwabangane nokungabikho - u-Antonio Gallego Buendía
2 IBedouin edolobheni - uJavier Sánchez-Almazán
3 Isambatho SikaTemplar - uLorenzo Arana Agudo
4 Intengo yenhlanhla - u-Armando Santiago Jiménez
5 Imbewu yomlotha - uLuis Moreno noJesús Valbuena
6 Iphupho Lesigamu Segazi - Farramuntana
Aranjuez. Phakathi kwabangane nokungabikho - U-Antonio Gallego Buendía
Siqala nge- izinkondlo yalo mbhali, owazalelwa eSiles futhi owafika e-Aranjuez ebuntwaneni bakhe. Le ncwadi ihlukaniswe izingxenye ezintathu: Mina Aranjuez namaphethelo, lapho ugqozi lwezinkondlo luvela kuye izinto zokuzilibazisa, wakho abangane futhi i isimo okuyizungezile. Owesibili, Phakathi kwabangane nokungabikho, inabalingisi abaphambili be- umndeni, abangane abaningi nabanye izinkumbulo. Futhi ekugcineni, Kubazukulu bami.
IBedouin edolobheni - UJavier Sánchez-Almazán
Este Umgcini weqoqo le-Invertebrate le-National Science Museum usevele ushicilele incwadi yezindaba: Ikhehla, isikhova nomfana ophethe ikhayithi nezinye izindaba ngo-2013, nale noveli ngo-2016.
Usitshela indaba ka Gabriel, insizwa ehlala eMadrid, isebenza eMnyuziyamu Yezesayensi Yezemvelo kanye nezithombe uhambo lwezincwadi nabangani ababili, u-Óscar noCurto. UGabriel une- ubudlelwane nowesifazane osekhulile kunalowo omcindezela ukuba angene ndawonye. Ngakho-ke uya ngezikhathi ezithile e-Aranjuez, nomalume wakhe uMoncho.
Ngolunye usuku, ngihamba ngejardines del Sitio yangempela, UGabriel kwenzeka ukuphonsa a umyalezo ngaphakathi kwebhodlela emanzini aseTagus. Lowo mlayezo uzofinyelela kumamukeli, ngomzuzwana ka izinguquko ezinkulu empilweni kaGabriel lokho kuzosho futhi ukuhlangana okusha.
Isambatho SikaTemplar - U-Lorenzo Arana Agudo
U-Arana Agudo uvela ku- Cuenca futhi lapho wafunda iTeaching, kepha ubelokhu ekhona iminyaka engamashumi amathathu e-Aranjuez.
Ushicilele ezine izincwadi. Izinkondlo ezimbili zokuqala: Ukuzizwa nokucabanga e Isiqashi sempilo. Owesithathu, Ezothando ezingaqondakaliYakhiwa izinganekwane eziyishumi ezibhalwe ezothando ezisethwe eCuenca. Okwesine, Ukukhonza uNkulunkulu nawe, isethwe kumashumi ayisithupha, iseprozi futhi inethoni yokuziphatha.
Kokugcina esikuso Toledo, lapho a Indaba yothando nenhliziyo ebuhlungu yezinsizwa ezimbili ezineminyaka engamashumi amathathu kumongo wenhlekelele yezomnotho yamanje. Ngakho-ke ukucabanga kwezepolitiki nefilosofi kuguqulwa ngezothando.
Intengo yenhlanhla - U-Armando Santiago Jiménez
USantiago Jiménez wazalelwa e-Aranjuez ngo-1964 futhi ungunjiniyela wekhompyutha. Ngomsebenzi wakhe ku ubuchwepheshe be-elekthronikhi, nothando lwakhe lwesayensi, wakhuthazwa ukuba abhale le ncwadi.
Ngakho usibuza ngaye kungani ube nenhlanhla noma ibhadi. Futhi yini engenzeka uma inkampani ethile enezinsiza ezanele zobuchwepheshe nezesayensi ithola ukuthi ingalawulwa kanjani ngaleso sikhathi? I-protagonist yale ndaba kuzofanele ukulwa nezizwe ezinamandla ezikhethekile kuma-algorithms futhi zifuna into efanayo, ukulawula isayensi, isimilo ngisho nenkolo.
Imbewu yomlotha - ULuis Moreno noJesús Valbuena
Luis Moreno es poeta futhi futhi umbhali wamanoveli. Ushicilele incwadi yezinkondlo Izinaliti Zamanzi namanoveli Sizobuye sibe nesibindi y Ukudelela isiphepho. NoJesu UValbuena kube yiminyaka eyishumi nanhlanu efana intatheli eningizimu yoMphakathi waseMadrid, kokubili emaphephandabeni abhaliwe nakuma-ejensi noma emsakazweni.
Lokhu kungokwakho umsebenzi wesibili ohlangene. Bayihambise ngoFebhuwari odlule kanti iyinoveli ka ubulili obumnyama setha ngendlela ecindezelayo isikhungo sezingane. Ngelinye ilanga enye yazo iyanyamalala izimo ezingajwayelekile ngoba akekho umuntu onganyamalala ngaphandle kokushiya noma yiluphi uhlobo lwentuthuko. Abasebenzi ababili bazozama ukuthola ukuthi kwenzekeni ngempela.
Iphupho leMestizo - UFarramuntana
Yilokho incwadi yesibili kusuka kusokhemisi UJuan Carlos Rodriguez, owaziwa kangcono njengoFarramuntana. Esokuqala kwaba O-Riparian, ibhalwe ngokuhambisana nonina. Ingabe i- isaga lomndeni enaba izizukulwane ezinhlanu lapho umlingiswa othile evelele khona, uMalume uCalores. Lokhu, okuyikho ngaleso sikhathi, kwenziwa nge-treinta izinganekwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Ezinye izincwadi eziyisi-6 zababhali abavela eRoyal Site naseVilla de Aranjuez. 2nd isitolimende
UJose Angel Orgaz Torres kusho
Okukodwa kokuthathu kulahlekile. Kunababhali abaningi, enginguye phakathi kwabo, abathi ngemibhalo yabo bafake isandla ekunikezeni incazelo ethe xaxa, uma kungenzeka, kubantu bethu abahlukile.
Phendula uJosé Ángel Orgaz Torres
Sawubona, José Ángel. Yebo, kuyiqiniso, kunezinye eziningi. Kepha sekunesikhathi eside ngabhala le ndatshana kwesinye isikhathi ababhali bayasidlula. Bona ukuthi ngingenza isitolimende sesithathu. Siyabonga ngokuphawula kwakho.
Laba ngababhali abakhokhelwa kakhulu emhlabeni